Forex Market Hours Tabilao
Ny latabatra fivoahan'ny tsenan'ny FX dia tsotra, mora vakiana, sarintany hafan'ny volombava, izay miseho maimaim-poana mandritra ny andro varotra, izay tsena mivelatra ary mihidy.
Why Market Hours fitaovana tena ilaina?
Makà fampahalalana mazava sy sary momba ny varotra varotra
Fantaro ny fotoana mahazatra indrindra amin'ny andro mahazatra amin'ny drafitry ny varotra
Fantaro ireo vanim-potoana miaraka amin'ny mety hitrangan'ny tsenam-bola
Esory tsoka ny tsena, izay matetika mahatonga fahavoazana tsy dia ilaina sy tsy ampoizina
Tsy misy fanadihadiana sarotra takiana mba hamaritana rehefa manokatra an'i Londres na manakaiky an'i New York ny sary iray mazava tsara manome ny vaovao. Ny mpivarotra izao dia afaka mamantatra ny fotoana fialan-tsasatra indrindra amin'ny andro mifanaraka amin'ny drafitry ny fifanakalozana ara-barotra, angamba ny fotoana mety hivoatra amin'ny tsenan'ny vidin-tsolika. Ny mpividy dia afaka manalavitra ny tsindry ara-barotra, satria ny fisokarohana eny amin'ny tsena dia manjary matetika amin'ny hetsika manan-danja izay mety matetika miteraka fahavoazana tsy dia ilaina sy tsy ampoizina.